Maxay qabteen golaha wakiillada cusub ee Puntland mudadii kalfadhiga 43aad? – Kalfadhi
March 12, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Hawlaha baarlamanka cusub ee Puntland ayaa bilawday 2dii Janaayo, 2019, markaas oo si rasmi ah loo dhaariyay 66da mudane ee ay ka kooban yihiin ee ay goboladu soo wakiisheen. Mudadii uu furnaa kalfadhiga 43aad waxay goluhu yeesheen 19 kulan.
Shaqadii ugu weynayd ee goluhu qabtay ayaa ahayd doorashadii guddoonka golaha iyo tan madaxtooyada oo lagu doortay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa isla markaasna dhacday 8dii Janaayo, ansixinta xukuumadda iyo hindisaha hirgelinta nidaamka axsaabta badan oo ay talo ka soo saareen una jeediyeen xukuumadda.
Ajandaha golaha ee la ansixiyay 14kii Janaayo waxaa qayb ka ahaa in la magcaabo guddiga joogtada ah isla markaasna la dhiso guddiyada kala duwan ee golaha wakiillada 5naad ee Puntland ay ka koobnaan doonaan, kuwaas oo ah 10 guddi oo kala duwan.
Golaha ayaa sidoo kale waxay bishii Janaayo si KMG ah u ansixiyay miisaaniyadda deg deg ah ee ay dowladdu ku shaqaynayso saddexda bilood ee sanadka ugu horeeya. Waxay ansixiyeen barnaamijka siyaasadeed ee dowladda iyo qorshaha golaha xukuumadda cusub.
Ma jiraan xeerar ay xukuumadda soo gudbisay oo ay meelmariyeen, maadama ay dhowaan shaqo bilawday, sidoo kalena kama aysan hadlin xeerarkii hore ee golaha horyaalay ee sugayay ansixinta.
20ka bishan Maarso ayaa goluhu ka soo noqonayaa fasax bil ah oo uu ku jiray waxay ka shaqayn doonaan dib u eegista iyo meelmarinta miisaaniyadda sanadka 2019 ee dowladda cusub, waxaa sidoo kale ajandaha ku jirta in xaalada amniga laga dhegaysto xukuumadda.
Shaqada ugu badan golahan oo ay ku jiraan ansixinta xeerarka cusub iyo dib u eegista kuwii hore golaha u horyiilay ayaa la filayaa in ay si xoog leh u dhacaan kalfadhiga 44raad oo furmi doona bartamaha bisha Juun ee sanadkan.